स्वचालित स्नेहक इन्जिन तेल भर्ने लाइन - Npoat.com
स्वचालित स्नेहक ईन्जिन तेल भर्न लाइन
यस प्रकारको मेसिन 4kg -30 kg तरल भर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले स्वचालित रूपमा अपरेशनहरूको श्रृंखला समाप्त गर्न सक्छ, जस्तै बोतल इनलेट, वजन भर्ने, र बोतल आउटलेट। विशेष गरी SL, खाद्य तेल स्नेहन को लागी। यो खाद्य पदार्थ, फार्मेसी, कस्मेटिक र रासायनिक उद्योगहरूको लागि राम्रो विकल्प हो।
1. यो मेसिनले PLC, टच स्क्रिन नियन्त्रण प्यानल, समायोजन गर्न सुविधाजनक अपनाउँछ।
2. प्रत्येक भरिने टाउकोमा तौल र प्रतिक्रिया प्रणाली हुन्छ। प्रत्येक भरिने टाउको विनियमित गर्न सकिन्छ।
3. फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर, अनुमानित स्विच र अन्य बिजुली तत्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध ब्रान्ड हुन्। कन्टेनर छैन, भरिने छैन। यदि कुनै कन्टेनर अवरुद्ध छ भने मुख्य होस्टले अलार्म ट्रिगर गर्न सक्छ।
4. जलमग्न भरणले फारम कम गर्न सम्भव बनाउँछ। यो विभिन्न प्रकारका भरिने उत्पादनहरूको लागि उपयुक्त छ।
5. सम्पूर्ण मेसिनले जीएमपी मानक पूरा गर्दछ। यसलाई सफा र मर्मत गर्न सजिलो छ, र भरिने उत्पादनहरूसँग सम्पर्क गर्ने भागहरू उच्च गुणस्तरको स्टेनलेस स्टीलबाट बनेका छन्। सम्पूर्ण मेसिन सुरक्षित, वातावरणीय, सेनेटरी छ, विभिन्न प्रकारका काम गर्ने ठाउँहरूमा अनुकूलन गर्दछ।
प्रकार उपयुक्त बोतलहरू क्षमता मेशिन आकार शक्ति बिजुली आपूर्ति सटीक
२ टाउको लम्बाइ: 160-3600mm चौडाई: 100-300mm
गर्दन व्यास: ≥Φ40mm
(अनुकूलित गर्न सकिन्छ) 30kg: 200BPH 2000*1700*2300mm २ किलोवाट AC220/380V
५०/६० हर्ट्ज ≤ ± ०.%%
4 टाउको 30kg: 350BPH 2500*1700*2300mm २ किलोवाट
6 टाउको 30kg: 520BPH 3500*1700*2300mm २ किलोवाट
8 टाउको 30kg: 600BPH 4500*1700*2300mm २.०० किलोवाट
दबाब संरक्षण प्रणालीको साथ, यदि बोतल गलत तरिकाले मिलाइएको छ भने, भरिने नोजल निश्चित उचाइमा खसेपछि उठ्नेछ।
उच्च गुणस्तर भरिने भल्भ, उच्च भरिने शुद्धता, द्रुत कार्य
पाइपहरूको बिभिन्न विकल्पहरू:
ग्राहकको बिभिन्न छनौट अनुसार, ग्राहकलाई भेट्न पाइपका बिभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ
विभिन्न तरल सुरक्षा भरण को विविधता।
स्वचालित क्यापिङ मेसिन:
मेशिनले रैखिक बोतल फिडिंग, PLC कार्यक्रम नियन्त्रण, डबल सिलिन्डर बोतल पोजिशनिंग, खाली गर्न र क्याप स्वचालित रूपमा ड्रप गर्न सक्दछ। डबल एक्शन लिफ्टिङ सिलिन्डरमा एकल-हेड मेशिन पहिले कभर बुझ्नको लागि, त्यसपछि स्क्रू क्याप। स्क्रू क्यापले हावा विस्तार प्रकार क्याच क्याप अपनाउँछ, र क्लच उपकरणसँग सुसज्जित छ, स्क्रू क्यापले बोतल क्यापलाई हानी गर्दैन, मेसिन ठूलो व्यासको ब्यारेलको स्क्रू क्यापको लागि उपयुक्त छ।
वायु स्रोत 0.6-0.8Mpa
शक्ति 2.5kw AC220/380v; 50/60 HZ
सर्वो मोटर रोटरी क्यापिङ हेडको टोक़ नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ, यसले बोतल र क्याप्सलाई नोक्सान गर्दैन।
टोपी समात्ने कार्य हावा सिलिन्डर द्वारा पूरा हुन्छ।
ग्राहकहरूको विशेष आवश्यकताहरू अनुसार, क्याप लिफ्टिङ मेसिनलाई क्याप अनस्क्र्याम्बलर र कन्वेयर बेल्टले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। क्याप्स र बोतलहरू परिवर्तन गर्दा समायोजन गर्न धेरै सजिलो।
क्याप्सका लागि बेल्ट प्रकार कन्वेयर, क्याप कन्वेयरको गति र स्थिरता बढाइन्छ, र क्यापहरू हराइरहेको हुँदैन।
बेल्ट कन्वेयरमा, एल्युमिनियम पन्नी बिना कभर हटाउन नो-एल्युमिनियम पन्नी टोपी हटाउन उपकरण स्थापना गर्न सकिन्छ।
स्वचालित डबल साइड लेबलिङ मेसिन:
यो मेसिन आईडी खाद्य पदार्थ, कस्मेटिक, औषधि, कीटनाशक र अन्य उद्योगहरूको लागि व्यापक रूपमा उपयुक्त छ। यो एकल छ
र फ्ल्याट, स्क्वायर र राउन्ड बोतलको लागि डबल साइड लेबलिंग जुन भोल्युम 1L भन्दा कम छ। कम्प्युटर द्वारा स्वचालित नियन्त्रण
(PLC) सजिलो सञ्चालन।
1. परिपक्व PLC नियन्त्रण प्रविधि अपनाउनुहोस्, मेसिनलाई स्थिर र उच्च गति बनाउनुहोस्। एकै समयमा उपयुक्त वा वर्ग / ओवल फ्लैट बोतल हुन सक्छ।
2. टच स्क्रिन नियन्त्रण प्रणाली, सरल, व्यावहारिक र कुशल सञ्चालन अपनाउनुहोस्।
बोतलहरू बीच केही खाली ठाउँ छोड्न उच्च गुणस्तरको पाङ्ग्रा अपनाउनुहोस्, ताकि लेबलहरू छुटेनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। स्पन्ज व्हीलको रोटरी गति दुई बोतलहरू बीच ठाउँ समायोजन गर्न समायोजित गर्न सकिन्छ।
लेबलहरू भण्डारण गर्ने र लेबल पेपर सङ्कलन गर्ने मेसिनका भागहरू विभिन्न प्रकारका लेबलहरू समायोजन गर्न मिलाउन मिल्ने गरी डिजाइन गरिएका छन्।
जर्मनीबाट आयात गरिएको फोटोइलेक्ट्रिक उपकरणहरू, र उच्च गुणस्तरको सर्वो मोटर अपनाउनुहोस्, लेबलिंग शुद्धता धेरै सुधारिएको छ।
१. स्थापना, डिबग
उपकरणहरू कास्टको कार्यशाला पुगे पछि
omer, हामीले प्रस्ताव गरेको विमान लेआउट अनुसार उपकरण राख्नुहोस्। हामी उपकरण स्थापना, डिबग र परीक्षण उत्पादनको लागि एकै समयमा अनुभवी प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेछौं। खरिदकर्ताले राउन्ड टिकट र हाम्रो इन्जिनियरको आवास, र तलब आपूर्ति गर्न आवश्यक छ।
हाम्रो कम्पनीले ग्राहकलाई प्रविधि प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। प्रशिक्षण को सामग्री संरचना को उपकरण र रखरखाव, उपकरण को नियन्त्रण र अपरेशन हो। अनुभवी टेक्निशियन मार्गदर्शन र प्रशिक्षण रूपरेखा स्थापना गर्दछ। प्रशिक्षण पछि, खरिदकर्ताको टेक्निशियनले अपरेशन र मर्मतसम्भार गर्न सक्दछ, प्रक्रिया समायोजित गर्न सक्दछ र विभिन्न असफलताहरूको उपचार गर्न सक्दछ।
Quality. गुणस्तर ग्यारेन्टी
हामी वाचा गर्छौं कि हाम्रा सामानहरू सबै नयाँ छन् र प्रयोगमा छैनन्। तिनीहरू उपयुक्त सामग्रीबाट बनेका छन्, नयाँ डिजाइन अपनाउनुहोस्। गुणस्तर, विशिष्टता र प्रकार्य सबै सम्झौताको माग पूरा गर्दछ।
After. बिक्री पछि
जाँच गरेपछि, हामी १२ महिना गुणस्तर ग्यारेन्टीको रूपमा प्रस्ताव गर्दछौं, नि: शुल्क प्रस्ताव लगाउने भागहरू र अन्य भागहरू कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्दछौं। गुणस्तरको ग्यारेन्टीमा, खरिदकर्ताहरूको प्राविधिकले विक्रेताको माग अनुसार उपकरणहरू सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्छ, केही असफलताहरू डिबग गर्नुहोस्। यदि तपाईं समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने हामी तपाईंलाई फोनमार्फत निर्देशन दिन्छौं; यदि समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेन भने, हामी तपाईंको कारखानामा टेक्नीशियन व्यवस्था गर्नेछौं समस्याहरू समाधान गर्न। टेक्निसियन व्यवस्थाको लागत तपाईं टेक्निशियनको लागत उपचार विधि देख्न सक्नुहुनेछ।
गुणवत्ता ग्यारेन्टी पछि, हामी प्रविधि समर्थन र बिक्री सेवा पछि प्रस्ताव गर्दछौं। उपयुक्त मूल्यमा लगाउने पार्ट्स र अन्य स्पेयर पार्ट्स प्रस्ताव गर्नुहोस्; गुणस्तरको ग्यारेन्टी पछि, खरीददारहरूको प्राविधिकले विक्रेताको माग अनुसार उपकरणहरू सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्छ, केही असफलताहरू डिबग गर्नुहोस्। यदि तपाईं समस्याहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने हामी तपाईंलाई फोनमार्फत निर्देशन दिन्छौं; यदि समस्याहरू अझै समाधान हुन सकेन भने, हामी तपाईंको कारखानामा टेक्नीशियन व्यवस्था गर्नेछौं समस्याहरू समाधान गर्न।
स्वचालित १--5L पिस्टन बोतल जार ल्यूब ईन्जिन तेल तरल भर्न मेशीन
Lit लिटर पिस्टन स्वचालित मोबिल लुब्रिकेटिंग ग्रीस मोटर ईन्जिन कार गियर लुब्रिकन्ट तेल भरने मेसिन
लाइनर प्रकार ईन्जिन तेल उत्पादन लाइन lube तेल भरने मेसिन
उत्तम मूल्य -1-१०० मिलि बोतलको ईन्जिन तेल भर्न मेशीन
जीएमपी प्रमाणपत्रको साथ स्वत: मोटर ईन्जिन तेल पालतु बोतल भरिने क्यापिंग मेशीन
पूर्ण रूपले स्वचालित खाद्य नारियल तेल भरिने मेसिनरी
स्वचालित ll jerrycan भरिने मेसिन
पूर्ण स्वचालित २ मा १ sus304 बोतल भरिने मेशिनहरू जैतुनको तेल बनाउनका लागि